Somaliland: Maxa Dhex Maray Komishanka Doorashooyinka Iyo Maxamuud Xaashi Xasaasi - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maxa Dhex Maray Komishanka Doorashooyinka Iyo Maxamuud Xaashi Xasaasi
Khatarta Ku Gedaaman Kulamo Qarsoodi Ah Oo Dhexmaray Wasiirka Madaxtooyada & Komishanka Doorashooyinka Qaranka.
Komishanka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland oo ka kooban todobo xubnood oo ka soo kala jeeda xisbiyada qaranka ayaa dhawaan kulan qarsoodi ah la yeeshay wasiirka madaxtoyada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Sida uu todobaadkii hore sheegay la taliyihii Madaxwaynaha ee arrimaha doorashooyinka Cabdillaahi Jawaan guddiga doorashooyinka ayaa codsaday inay kali ku noqdaan kulan ay la lahaayeen wasiirka madaxtooyada oo uu Cabdillaahi jawaan ku wehelin lahaa, waxaanay xubnaha komishanku diideen inuu Jawaan qayb ka noqdo shirkooda, taasoo muujinaysa inay jiraan waxyaabo qarsoon oo xitaa masuuliyiinta doorashooyinka ku shaqada leh qaarkood aan loo ogolayn.
Bulshada Somaliland ayaa walaac wayn ka muujisay dhex-dhexaadnimada komishanka doorashooyinka iyo sida loogu aamini karo hawsha doorashada ee baaxadda leh una baahan cadaalad iyo go’aan qaadasho adag.
Sidoo Siyaasi Cali Cantar oo ka mid ah hogaanka xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ayaa waxaa uu guddida doorashooyinka Somaliland ugu baaqey in ay bulshada u cadeeyan ujeedka uu daaranaa kulan qarsoodi ah oo ay la qateen Wasiirka madaxtooyada Somaliland, isla markaana kulankaas ay ka sareen Cabdilaahi Jawaan oo ahaa la taliyihi madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka .
Ka hor intii aanu warkani soo bixin waxaa jiray dhaliilo badan oo komishanka doorashooyinkan loogu jeedinayay qaabka ay u wadaan hawlaha doorashada waxaa sidoo kale guddigan lagu dhaliilaa inay yihiin kuwii ugu jilicsanaa ee soo mara qaranka.
madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka .